Amin'ny fanadihadiana dia matetika ny mpanjifa no manontany hoe: Ahoana no hivarotana baolina vy? Ohatrinona ny vy vy? Mino aho fa io no olana lehibe indrindra amin'ny mpanjifa. Matetika aho tsy manolotra teny nalaina ho an'ny mpanjifa avy hatrany, izay tompon'andraikitra amin'ny mpanjifa ihany koa. Satria tsy manam-bola ny mpanjifa ...
Inona avy ny fanasokajiana ny baomba vy vy?
1. Araka ny fitaovana, dia mizara ho baolina karbaona karbaona ambany, baolina vy karbaona antonony, baomba vy mahery karbaona, ny akora fototra dia 1010-1015, 1045, 1085, sns. 2. Araka ny hamafin'izany dia mizara ho baolina malefaka sy baolina mafy izy io, izany hoe mitsara raha ...
Condar Steel Ball dia milaza aminao hoe inona ny naoty ny baolina vy?
Mitondra kilasy maro ny baolina vy. Araka ny lisitra naoty ao amin'ny fenitra nasionaly GB / T308-2002, mizara ho G5, G10, G16, G28, G40, G60, G100, G200, G500, G1000, sns G izy ireo no voalohany litera amin'ny anglisy , ary ireto isa manaraka ireto dia manana ambaratonga samihafa. Ny kely kokoa ny torimaso ...
Condar Steel Ball dia milaza aminao ny zavatra tokony hatao raha toa ka misoloky ny baolina vy?
Na iza na iza mampiasa baolina vy sy baolina vy, mino aho fa hihaona amin'ny olan'ny vy vy halatra izy ireo. Noho ny fitahirizana tsy mety, indrindra ny baomba vy sy ny baomba vy, dia voafaritry ny fisorohana azy io-tsy fisorohana ny harafesina, fiparitahan'ny rivotra lava, indrindra amin'ny humi ...
Iza no andriana ao amin'ny baolina vy tsy misy fangarony?
316 sy 440 dia an'ny aristokrasia amin'ny baolina vy tsy misy fangarony, miaraka amin'ny fanoherana ny harafesina tsara ary ny fanoherana ny harafesina mafy, ary miakatra ny vidiny miaraka amin'ny vidiny. Ity Condar Steel Ball manaraka ity dia mampahafantatra ireto roa amin'ny antsipiriany: baolina vy vy 1.316 — Taorian'ny taona 304, izy no faharoa be mpampiasa indrindra ...
Fomba famokarana baolina vy
(1) Dingana famokarana tsotra ny baolina vy Wire-sary-mangatsiaka lohateny mahatonga ny baolina banga endrika → fanesorana fehin-kibo → fikosoham-bolo → fikosehana malefaka → bolongana banga mamorona → baolina manjelanjelatra (na fampirimana → fikosoham-bary malefaka) → fitotoana mafy → fitotoana tsara → fikosoham-bary tsara (na polishing) → fikosoham-bary tsara ...